Maitiro ekutsvaga kunze kwekufamba mavhidhiyo kubva ku iPhone 6 kuti ugone kuagovera iwo | IPhone nhau
Maitiro ekutsvaga kunze kwekufamba zvishoma mavhidhiyo kubva ku iPhone 6 kuti ugone kuagovera iwo
Kuuya kweiyo iPhone 5s kwakatiunzira isu vashandisi veIOS mukana we rekodhi mukufamba zvishoma, basa rakagadziriswazve nekuuya kweiyo iPhone 6, iyo inokwanisa kurekodha kaviri iyo FPS yeiyo iPhone 5s (240fps yeiyo iPhone 6 uye 120 yeiyo iPhone 5s). Asi chii chinoitika kana tichida kugovera mavhidhiyo edu muSlow Motion? Zvakanaka, tinoratidzwa nedambudziko rakaoma kunzwisisa, kubvira Apple haitibvumire kutumira vhidhiyo natively.
Zvinoitika kuti Apple haina kusanganisira yekushandura sisitimu kuti tikwanise kuona vhidhiyo mukufamba zvishoma pane chero chishandiso. Sezvinei, kana tikatora vhidhiyo kubva ku iPhone yedu, vhidhiyo ichaonekwa panguva yakajairwa kumhanya pasina chero anononoka kufamba mhedzisiro, izvo zvisingaite kwatiri. Iyo Inononoka Nguva mutambi anotibvumidza kuona uye kusarudza iyo chikamu kuti itore zvishoma, asi isu hatigone kuchengetedza vhidhiyo. Kunyangwe iyo Mac iMovie ine dambudziko rekushandura vhidhiyo. Sezvandinotaura, zvisinganzwisisike.
Pazasi ini ndinoratidzira nzira idzo, kwandiri, dziri nyore kwazvo kutumira vhidhiyo, iri ipapo ichatibvumidza isu kuigovana kuburikidza chero mameseji kunyorera kana pasocial network.
1 Sei Export Slow Motion Vhidhiyo kubva ku iPhone 6
1.1 Kuitumira kwatiri
1.2 Iine iMovie yeIOS
1.3 Shandisa mamwe maapplication kubva kuApp Store
1.4 NeKufamba Kwebasa
Sei Export Slow Motion Vhidhiyo kubva ku iPhone 6
Sarudzo yakapusa iyo isu tese tinayo ndeye Tumira vhidhiyo yacho kwatiri. Vhidhiyo yacho ichave yakanyorwa uye, kana yangotumirwa nekuchengetwa, tichava nayo inononoka kufamba uye inoenderana nechero mudziyo, wakagadzirira kugovana.
Iine iMovie yeIOS
Kana isu tine iMovie application pane yedu iPhone, tinogona kutumira kunze vhidhiyo kuti tikwanise kuiona ichinonoka kufamba pane chero chishandiso. Asi hapana nzira yekuzvipira kwazviri (uye ini handizvinzwisise. Ndanga ndatozvitaura here?), Asi isu tichafanirwa kugadzirisa vhidhiyo tisati tazvichengeta. Nzira yakapusa, kana vhidhiyo yacho isina kupfupika, ndeyekubvisa zvishoma kubva pakutanga kana kumagumo wozochengeta vhidhiyo pane reel. Kana yangochengetwa pane reel, inenge yatove inoenderana nechero mutambi.
Shandisa mamwe maapplication kubva kuApp Store
SuperSlo. Kune zvakare akawanda mafomu muApp Store ayo anotibvumidza isu kutumira kunze mavhidhiyo edu mune inononoka kufamba. Imwe yeayo andinokurudzira, kunyangwe isiri yemahara, iSuperSlo. Ichi chishandiso chiri nyore chinotibvumidza isu kutumira kunze uye kutema (kana tichishuvira) vhidhiyo kuti tichengete gare gare pane reel. Zviri nyore chaizvo kushandisa uye haana kurasikirwa. Zvakanaka chaizvo izvo sarudzo yemuno iOS inofanira kunge iri.
Zvishoma nezvishoma Zvinononoka. Iyi yechipiri application ndeye mahara, asi isu tichafanirwa kugadzirisa kumhanya nemawoko, izvo zvinogona kunge zvichinyonganisa kana tichida kusevha vhidhiyo pane chaipo 240fps. Tichafanirwa kufambisa mashoma mapoinzi pamutsetse wekumhanya (semuma edhiyo edhita) kugadzirisa kumhanya kwevhidhiyo.
Uye ini ndinoponesa wandinoda kwekupedzisira. Kufamba kwebasa ndiko kumwe kunyorera kwakanyanya kweApp Store yese, Kubva pakuona kwangu. Kana isu tichifanira kushandisa imwe mari kuzvikumbiro, izvi "zvinofanirwa kuve nazvo" pasina kupokana. Uye zvakare, ikozvino yave kutengeswa (yayo isiri-yekusimudzira mutengo ndeye € 4.99). Ne Workflow isu tinokwanisa kugadzira mafashama ekuwedzera uye kuwedzeredza izvo zvinotibvumidza isu kuita chero zvese. Zvatichazofanira kuita kugadzira «Workflow» ndiko kuwedzera, kuratidza kuti ndeapi mafaera aachakwanisa kushanda pa (midhiya) uye kuwedzera chiito "Sevha Mapikicha kuAlbum"(Sevha mafoto pane reel), tobva taratidza dambarefu ratiri kuda, iro kwandiri ini ndakasarudza" camera roll "(reel). Kana iwe uchida, iwe unogona kugadzira dambarefu rakanzi "Camara Lenta" uye sarudza iyo albamo kune ako Slow Motion mavhidhiyo. Kana iwe uchida, ndinokusiya iyi link kune iyo Workflow (vhura neiyo iPhone) iyo yandazvigadzira ini (hapana akandikandira matombo. Ndinoziva kuti hazvigone kuve nyore 😉). Kuti tishandise isu tinongofanirwa kuita zvinotevera:
Tinoenda kune reel uye tinosarudza vhidhiyo tinoda kutendeuka.
Tinobaya pane bhatani share.
Tinosarudza «Mhanya Workflow»(Kana iwe usingaizvione, tinya pane« Zvimwe »uye uite kuti zviitwe).
Isu tinobata paKufamba kweBasa izvo zvatakasika, izvo kwandiri zvinonzi «Chinja Slow Motion".
Isu tinoenda kune reel uye tinogovana vhidhiyo.
Kufamba kwebasa kushandura anononoka kufamba mavhidhiyo.
Zviri pachena, uye izvo hazvigone kupikiswa nechero ani, kuti hapafanire kuve negwara rekugona kuburitsa kunze nekugovana mavhidhiyo uye ndinodzokorora kuti handinzwisise zviri kufungwa naApple kana isina kusanganisira nzira yemuno muIOS. Asi, zvirinani, apa une akati wandei sarudzo dzinogona kukubvisa mumatambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekutsvaga kunze kwekufamba zvishoma mavhidhiyo kubva ku iPhone 6 kuti ugone kuagovera iwo
Ndine mavhidhiyo muSlowMotion uye anotaridzika kunge akakwana paFacebook ne Instagram uye Youtube uye ini ndangovagovana kubva kuiyo iPhone6 ​​reel, ndisingafanire kuita zvisinganzwisisike zvinhu
Hongu, asi izvi hazviwanzo zvakadaro. Iyo yepamutemo Twitter application yabvumidzawo nguva pfupi yadarika, asi kana iwe uchida kuitumira neWhatsApp, semuenzaniso, vhidhiyo inotumirwa neyakajairwa kumhanya. Uye kana iwe ukaipfuudza kune komputa, haina kutaridzika mukufamba zvishoma kana. Iri gwaro nderekuti rionekwe kwese kwese.
Kana iwe ukavatumira neWhatsApp, kana iyo slowMotion mhedzisiro inochengetwa
nawhatsapp kana ichitumirwa nespeed yekuti iwe une vhidhiyo, chinhu chega chausingakwanise kuita kugadzirisa iyo spidhi, asi vhidhiyo inosara sekutumirwa kwauri. kana zvisiri, zviedze pachako nekutumira imwe, zviri nyore izvo-
Masikati akanaka, Andrés. Ichokwadi kuti iwe unogona neWhatsApp uye nemasevhisi mazhinji, asi kwete nezvose kana zvakati wandei. Iyi yekupinda ine chikonzero chayo chekuve kunze kwenyika mavhidhiyo kuitira kuti aenderane neZVESE uye kwete chete nezvakanyanya kushandiswa mafomu.
Ini ndinogovana mavhidhiyo paWhatsApp pasina dambudziko, yatove mukushandisa inoita kuti iwe usarudze mutsetse mukufamba zvishoma uye iye anogamuchira anougamuchira zvakakwana kunyangwe aine zvishoma zvishoma mhando ...
Uye kusimbisa vhidhiyo uye ndosiya mutsetse mukufamba zvishoma kusingazungunuke ini ndinoshandisa iMovie, kwete sarudzo yekugovana izvo zviri nyore, asi ini ndinovhura iyo app uye kamwe mairi ndinovhura vhidhiyo iri mubvunzo, rinotooneka nemutsara pa kamera inononoka yatakasarudza mu «reel». Inongotumirwa kunze kwenyika, uye kana isu tisingade kuita chero gadziriso senge kuunza zvimwe zvikamu mukufamba zvishoma, kushandura kumhanya, nezvimwe, tichava nazvo pane reel yakagadzirira kushandiswa chero kupi.
Ndakanganwa, ndinoita zvese izvi kubva ku iPhone. Iko kune zvakare mukana wekupfuura nepakati peMac neyekushandisa Mifananidzo, sezvo ichipa mukana wekuburitsa mifananidzo nemavhidhiyo ane chero mhando yekugadzirisa yatoverengerwa.
Pablo, wakadii hako? Shamwari, iwe unofunga iwe unogona here kutumira posvo nezve iro rekufambisa basa! Ndine uye handitomboishandisa zvachose, asi ndakaitenga nekuti pane hurukuro yakanaka kwazvo nezvayo!
Iwo mavhidhiyo anogona kugovaniswa zvakakwana neWhatsApp, Facebook kana chero kwaunoda uye vanochengeta iyo Slow mhedzisiro, ini handizive kuti zvine musoro chii positi iyi ...
Mangwanani akanaka, Tasio: Ini ndaita iyi post nekuti haigone kugoverwa chero kwaunoda, kwete kune zvese. Semuenzaniso, kana, seni yangu, ukasashandisa yepamutemo Twitter application uye iwe uchida kurodha vhidhiyo muSlow Motion, inozoisa iyo neyakajairika kumhanya. Kana iwe uchida kuendesa vhidhiyo yacho kumakomputa, ichaipfuudza kwauri nekukurumidza kumhanya. Kana iwe uchida kuisa yako vhidhiyo kune vhidhiyo webhusaiti isiri YouTube kana Vimeo, ichaiswa pasipidhi yakajairwa. Kana iwe ukatengesa kunze, inogona kuonwa mukufamba zvishoma kwese kwese, zvachose kwese, uye pasina matambudziko ekusawirirana.
rinenge gore rimwe mushure meichi chinyorwa ndinongoti…. Ndatenda zvikuru izvi ndizvo zvandaitsvaga ... ini ndaida kupfuudza vhidhiyo inononoka kukombuta yangu uye handina kuwana chero nzira izvozvi ndinoziva kuti ndatenda sei Pablo XD
Jose Luis Madrigal akadaro
Nei vhidhiyo inononoka ichirasikirwa nekukasira kana uchiisa paFacebook kana kana uchiigovana paWhatsApp kana Teregiramu? Zvandinogona kuita?
Pindura José Luis Madrigal
pandinoipfuudza palaptop yangu inoita kunge yakamira
Ungachinja sei mhedzisiro yeSiri kuva JARVIS
Halo Kudzoka kunounza "kumashure" bhatani kune iyo iPhone